खेल – CBKhabar.com | Nepali News Portal
By सन्दीप खत्री / breaking, खेल, समाचार
चितवन, वैशाख १३ । आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमी कालिका नगरपालिकाले ’प्रथम कालिका गोल्डकप’ फुटबलको उपाधि जितेको छ । (आइतबार) सम्पन्न फाइनल खेलमा रड्स क्लब रामपुरलाई पराजित गर्दै आयोजकले उपाधि जितेको हो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा आयोजक १–० ले बिजजी भयो । आयोजकका लागि सन्त गुरुङले दोस्रो हाफको पाँचौ मिनेटमा गोल गरेका थिए । उक्त गोलनै …
आयोजकलाई कालिका गोल्डकपको उपाधि विष्तृतमा
By सन्दीप खत्री / खेल
बैशाख ४ । शशस्त्र प्रहरी बल (एपिएस) भण्डारा चितवनको कालिका नगरपालिकामा जारी ’प्रथम कालिका गोल्डकप’ को दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । (शुक्रबार) सम्पन्न निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा लेखनाथ युनाइटेड पोखरालाई हराउदै एपीएफ भण्डारा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफ भण्डारा सडन डेथमा बिजयी भएको हो । त्यस अघि निर्धारित समयको खेल गोलरहित …
कालिका गोल्ड कप : लेखनाथलाई हराउदै एपीएफ भण्डारा दोस्रो चरणमा विष्तृतमा
चैत ३१ । भरतपुर मेयर कप क्रिकेट बैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । भरतपुर क्रिकेट क्लबको आयोजनामा दोस्रो संस्करणको भरतपुर मेयर कप हुन लागेको हो । भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हुने प्रतियोगितामा विद्यालय तथा वडा स्तरका १८ टोली सहभागी हुने आज (सोमबार) भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ । सहभागी टिमहरुमा १६ …
बैशाख २ देखि दोस्रो संस्करणको भरतपुर मेयर कप विष्तृतमा
चितवन,चैत २१ । अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन ९एआरए० क्यामरुनले ’सेन्ट्रल कलेज स्व। बिजय खड्गी स्मृति गोल्डकप फुटबल’ को उपाधि जितेको छ । नारायणगढको क्याम्पाचौरमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा एआरए क्यामरुनले त्रिभुवन आर्मीलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । क्यामरुनको जितमा किउटे, बास्सेक र मौसाले समान एक–एक गोल गरे । आर्मीका सुशान्त चौधरीले एक …
स्व. बिजय खड्गी स्मृति गोल्डकपको उपाधि क्यामरुनलाई विष्तृतमा
चितवन,चैत २० । सेन्ट्रल कलेज स्व. बिजय खड्गी स्मृति गोल्डकप फुटबलको फाइनल भोलि हुँदैछ । नारायणगढको क्याम्पाचौरमा जारी खेलको फाइनल भोलि हुने भएको हो । भोलिको फाइनलमा अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन (एआरए) क्यामरुन र त्रिभुवन आर्मिवीच प्रतिस्पर्धा हुँनेछ । क्यामरुन (बिहीबार) सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा बागमती युवा क्लब सर्लाहीलाई टाइब्रेकरमा ४–३ ले पराजित गर्दै फाइनल पक्का …
स्व. बिजय खड्गी स्मृति गोल्डकपको फाइनल भोलि विष्तृतमा
चैत १३ । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा फर्साटिकर एफसी रुपन्देहीलाई हराउदै सुनौलो संगम युवा क्लब बुटवल चितवनमा जारी सेन्ट्रल कलेज स्व. बिजय खड्गी स्मृति गोल्डकप फुटबलु को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सुनौलो संगम बुटवलले फर्साटिकरलाई टाइब्रेकरमा ५-३ ले पराजित गर्‍यो । टाइब्रेकरमा फर्साटिकरका भुपाल गुरुङ गोल गर्न चुके । त्यसअघि निर्धारित समयको खेल २-२ को बराबरीमा …
फर्साटिकरलाई हराउदै सुनौलो संगम नारायणगढमा जारी खेलको सेमिफाइनलमा विष्तृतमा
आईपीएल अक्शनमा सन्दीप परेनन
फागुन ७ । नेपाली लिग स्पेनर सन्दिप लामिछानेले इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल गुमाएका छन् । आइपिएलको अक्शनमा लामिछाने ुअनसोल्डु भएपछि उनी वाहिरीन वाध्य भएका हुन् । चेन्नईमा भएको अक्शनमा उनले न्यूनतम अनुबन्ध रकम ४० लाख भारु राखेपनि अनसोल्ड भए । सन्दीपलाई कुनै पनि क्लबले अनुबन्ध नगरेको हो । तीन वर्षका लागि दिल्ली क्यापिटल्समा अनुबन्ध …
आईपीएल अक्शनमा सन्दीप परेनन विष्तृतमा
By सन्दीप खत्री / खेल, समाचार
माघ २९ । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदै छ । आयोजकका अनुसार पहिलो खेलमा दिउँसो १२ बजे उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका खेल्ने छन् । खेल एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा हुनेछ । यस्तै, आजै हुने दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र विराटनगर महानगरपालिका खेल्ने छन् । यो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा …
राष्ट्रिय महिला लिगमा आज दुई खेल हुँदै विष्तृतमा
महिला राष्ट्रिय लिगको दोस्रो चरणका खेलहरु हुने तालिका सार्वजनिक
माघ २३ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले हिजो राष्ट्रिय महिला लिगको दोस्रो चरणको खेलतालिका सार्वजनिक गरेको छ । जसमा अन्तिम खेल एपीएफ र आर्मीबीच हुने भएको छ । फागुन ७ गते दशरथ रंगशालमा एपीएफ र आर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पहिलो राउण्डमा एपीएफले आर्मीलाई २(० ले पराजित गरेको थियो । एपीएफले ६ खेलबाट १८ …
महिला राष्ट्रिय लिगको दोस्रो चरणका खेलहरु हुने तालिका सार्वजनिक विष्तृतमा
नेपाली क्रिक्रेट टिमको कतार भ्रमण स्थगित
माघ १९ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कतार भ्रमण स्थगित भएको छ । कतार स्पोर्टस डे को दिन नेपाल र कतारवीच हुने खेल स्थगित भएसँगै भ्रमण रोकिएको हो । नेपाल क्रिकेट सङ्घ ९क्यान० ले सोमवार सूचना निकालेर फेब्रुअरी ९ देखि १२ अर्थात् माघको २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म तीन ट्वान्टी–ट्वान्टी शृङ्खला स्थगित भएको जानकारी दिएको हो …
नेपाली क्रिक्रेट टिमको कतार भ्रमण स्थगित विष्तृतमा
मध्यरातमा संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा १९ माघ २०७७, सोमबार २१:४८
सांसदहरु दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको ठहर १९ माघ २०७७, सोमबार २१:४८
आज मात्रै २१४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु १९ माघ २०७७, सोमबार २१:४८
नवलुरमा थप १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो १९ माघ २०७७, सोमबार २१:४८
कोरोनाबाट चितवनमा एकैदिन १५ जनाको मृत्यु १९ माघ २०७७, सोमबार २१:४८